IWundlu (ukulungiselela iresiphi)
Ukuze izizwe eMpumalanga eSwatini kuphela iwundlu. Ungadliwa izitsha ezahlukene ezivela nakho ngokuchichimayo hhayi kuphela ukupheka empumalanga, kodwa futhi cuisine Russian. Nakuba ezinye abathengi ungathandi nephunga futhi ukunambitheka yemvu amafutha. Ngakho-ke inyama idinga ukwengeza amakhambi enamakha, garlic kanye nososo ehlukahlukene.
A inzuzo enkulu yalesi inyama Kuyaphawuleka ukuthi iwundlu, okuyinto zokupheka ethulwa abafundi, uhlu izitsha zokudla. Zingahlanganisa ngisho izingane imenyu, kuyilapho yengulube ukunikeza izingane is hhayi Kunconywa.
EMpumalanga, ngisho ukulungiswa izitsha kuqala ngokuvamile ezisetshenziswa iwundlu. Ungadliwa for inyama isobho cuisine Russian ngempela efanelekayo yemvu kuqala abilisiwe. Kodwa luyingxenye isidlo Oriental kungenziwa ngokuthi chikhirtma.
Ukuze kubalulekile ukuthatha 115 amagremu of inyama, iqanda, 2 medium anyanisi, isipuni ufulawa, ibhotela noma ghee amagremu 15, iwayini uviniga isipuni liqhakaze futhi cilantro ngoba kancane.
Nakuba leli wundlu iphekwe, chef elungiselela refueling chikhirtma. Okokuqala, i-pan ukuthosa ibhotela wabeka anyanisi oqotshiwe, bese ufaka ufulawa kuwo. Ngemuva kwemizuzu engu-3, pan ingezwe umhluzi kancane, kahle enyakaza futhi alethwe ubilise, ngemva kwalokho-ke wavunyelwa sokunika.
Uma ethosiwe selehlile, ngokuqapha busuka ke amaqanda izikhupha lapho ungeze tincture liqhakaze, uviniga imifino oqoshiwe. Refueling kufanele afakwe isitokwe kuphela ngemva kokuba selehlile, amaqanda kungukuthi curled. Chikhirtma yingakho ungeke ubilise.
Khonza lokhu dish, gqoka ucezu 2 noma 3 izingcezu inyama ngalinye nangesandla esivulekile efafazwe nokudla okuluhlaza.
Futhi inkambo main njengoba ngokuvamile sisetshenziswa iwundlu. Ungadliwa ekuwulungiseleleni esuselwe kokubili isitshulu futhi wosa. iwundlu Tasty ephekwe ucwecwe, kuyinto enhle kakhulu ngesimo meatballs futhi hamburger, ravioli futhi samsy. Nakuba uhlu izinto zingenziwa kusukela kule inyama, ungaya ku-futhi.
IWundlu in ucwecwe
Ngenxa yalesi isidlo ngokuphelele ezifaneleke izingcezu ezine iwundlu, kungcono uma umucu zizobekwa ithambo. Isidingo sabo sokuqala kulolo ketshezi okungenani ihora, kodwa kungaba ngcono uma le nqubo izoqhubeka kuze kufike usuku. Kwezinye izimo kungenzeka 4 amahora ukubeka izitsha inyama esiqandisini.
Marinate leliya wundlu kufanele kube ngale ndlela: inyama kufanele ulifafaze ukusika bulbils, okuyizinto izimpaphe ekuseni anyanisi oluhlaza, pepper kanye namakhambi oqoshiwe, oregano, Ukukhemezela ne kalamula futhi uthele amafutha zemifino. Khona-ke izitsha inyama embozwe ngesivalo futhi ngenkuthalo ezinyakaziswayo izikhathi eziningana.
Inyama sibekwa isikhunta uphahlwe ucwecwe phezu izingcezu zingabekwa kulolo ketshezi utamatisi Diced imibuthano aqotshwe anyanisi oluhlaza. Gourments bakhetha ukusebenzisa imifino nezinye, uzengeze ifomu.
Shisisa kuhhavini lokushisa 190-200 degrees, kufanele ibekwe ngaphakathi uphawu ucwecwe izingcezu inyama ngesimo okungenani ihora. Hlola ukulungela wewundlu kungaba nge lokuvungula noma ngommese obukhali: kumele kube soft futhi ukukhiqiza juice ecacile.
Uma umpheki unomuzwa wokuthi isidlo isicishe ilungele, kungashiwo abafafazwe ushizi yashizi inyama imizuzu 10 dopekat iwundlu kakade kudalulwe ne ucwecwe.
Ukuze inyama ocime namanzi ikakhulukazi futhi ethambile, lapho simo kufanele ngaphambi marinate ukwelashwa ukushisa kwi uhlelo langaphambilini, embozwe ngokuningiliziwe encazelweni iresiphi ngewundlu in ucwecwe.
Lokhu kulandelwa futhi anikine izitsha inyama awubeka kanye marinade epanini esishisayo ngamafutha zemifino. Imvu eyosiwe kuze ithenda phezu emlilweni ophansi, govuza ngezikhathi ezithile okuqukethwe.
Khetha iresiphi of jam currant obomvu
Amazambane athosiwe ne chanterelles - yini kangcono!
Ikhekhe Christmas: iresiphi. Christmas ikhekhe nge-apula
Kanjani amandla AHCI ku-Windows: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo, izici kanye nokubuyekeza
Ipulazi Hlala - izimonyo Korean: okunezinhlobonhlobo, ukwakheka, ukubuyekezwa
Namasongo Original izinsini: "Imbali July", "Spring"
Imininingwane yokudlala i-karaoke kukhompyutha yakho ngokusebenzisa imakrofoni
8 Pentacles Tarot: incazelo kanye nencazelo
Kungani abantu uyazibuza kanjani crack amaphasiwedi e-Mile?
Kazan izindawo. Kirov futhi eMoscow izifunda: indawo, ikakhulukazi
Ukuhlukunyezwa ehhovisi. Yini lokhu kusho Criminal Code